Hay’addaha Caalamiga Ah Ee Xuquuqda Aadamaha Oo Baaqyo Qaylo-dhaan Ah Kasoo Saaray Xaalaldda Weriyayaasha Lagu Laynayo Somalia Iyo Tirada 25 Weriye Oo La Khaarajiyay | Araweelo News Network (Archive) -
Hay’addaha Caalamiga Ah Ee Xuquuqda Aadamaha Oo Baaqyo Qaylo-dhaan Ah Kasoo Saaray Xaalaldda Weriyayaasha Lagu Laynayo Somalia Iyo Tirada 25 Weriye Oo La Khaarajiyay
Washington(ANN) Hay’addaha Xuquuqda Aadamaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International oo fadhiyadoodu yihiin Washington iyo London, ayaa baaqyo kala duwan kasoo saaray xaaladda weriyayaasha ka hawlgala Somalia eel ala beegsado hawlgalada iyo shirqoolada
sanadii u danbeeyay.
Hay’adda Human Rights Watch, ayaa baaq ay soo saartay kaga dalbatay inay dawladda taagta daran ee Somalia, baadhitaan rasmi ah ku samayso sabata dilalka weriyaaysha Somaalida ah. Kadib markii February 28, 2012, magaalada Muqdisho lagu dilay Allah haw naxariistee Marxuum Abukar Hassan Mohamoud oo ay toogasho ku dileen dablay aan la aqoonsan.
Weriyahaa oo ahaa Agaasimhii Idaacadda Radio Soomaaliweyn, waxayna Human Rights Watch ka dalbatay dawladda Somalia in la helo baadhitaan cad oo ku waajahan sababta loo bartilmaamedsanyo weriyaaysha, iyadoo sidoo kalena ku xustaybaaqeeda in sidoo kale magaalada Muqdisho lagu dilay January 28, laba suxufi oo mid ahaa Hassan Osman Abdi, kaas oo ahaa Agaasimaha Shabelle Media Network.
Waxa kaloo baaqaa Human Rights Watch lagu sheegay in magaalada Muqfdisho lagu dilay December 18, 2011, Abdisalam Sheik Hassan oo ahaa suxufi madaxbanaan oo ka hawlgelayay Horn Cable TV Station. Sidoo kalena Mukhtar Mohamed Hirabe lagu dilay Muqdisho 2009, iyo Bashir Nur Gedi in oo isna la dilay 2007.
Human Rights Watch waxay sheegtay inay dhinacyada isku haya Somalia aanay ogolayn, isla markaana xaqdhawrayn xoriyada saxaafada iyo madaxbanaanida, iyadoo ay weriyayaasha ilaa 2007 lagu dilay Somalia marayaan 25 Journalist. Sida ay Hay’addu sheegtay, waxayna xustay in shirkii dhowaan 23 Feb 2012 ka dhacay London ee arrimaha Somalia aan lagu soo hadal qaadin xuquuqda iyo xoriyada saxaafada, isla markaana aanay go’aamada kasoo baxay shirkaa ahayn kuwo wax ka bedelaya xaalada qalafsan ee Somalia. maadaama aan meela lagaga xusin la xisaabtanka dhinacyada Somalia ee xuquuqda aadamaha iyo xoriyada saxaafada.
Dhinaca kale hay’adda Hay’adda Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadamaha Amnesty International ayaa canbaaraysay dilalka weriyayaasha Soomaalida ee ka hawlgala Hay’addaha warbaahineed ee Soomaalida, gaar ahaan Magaalada Muqdisho ee xarunta dalkaas oo Suxufiyiin badan oo aan waxba galabsan lagu khaarajiyey bilihii u dambeeyey.
Hay’adda Xuquuqda Aadamaha ee Amnesty International oo fadhigeedu yahay magaalada London ee waddanka Ingiriiska, ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaaraysay dilalka joogtada ah ee lagu hayo Weriyeyaasha Soomaalida ee dalka gudihiisa ka hawlgala. Warbixintan oo uu soo saaray xafiiska Afrika u qaabbilsan hayâ€™addaas shalay, ayaa lagu sheegay in laba bilood oo keliya lagu dilay Muqdisho saddex suxufi, taasina ay tahay khatar lagu hayo Weriyeyaasha ka howlgala xarunta dalka Soomaaliya ee Muqdisho, isla markaana ay arrinta gumaadka Suxufiyiintu helis kale ku yahay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Aadamaha ee ku sugan Soomaaliya. Abuubakar Xasan Maxamuud (Kadaf) wuxuu ahaa Weriyihii saddexaad ee lagu dilo Muqdisho muddo laba bilood gudahood ah, iyadoo ciidammada dowladdu ay hadda ka taliyaan Muqdisho oo dhan. ayaa lagu yidhi warbixinta.
Sidoo kalena Ammaanka Muqdisho oo ay DKMG ah ka taliso ma noqon karo mid la isku halleeyo haddii aan lasoo qaban oo aan lala xisaabtamin kuwa masuulka ah ka ah weerarrada ka dhan ah suxufiyiinta iyo dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda Aadaamaha yaa lagu yidhi warbixinta Amnesty International, taas oo lagu xusay in beesha caalamka looga baahanyahay sidii dhibaatada suxufiyiinta Somalia iyo mushkilada khatarta ah looga hortegi lahaa.